नेपालमा सी विचारधाराको प्रभाव - China Radio International
नेपालमा सी विचारधाराको प्रभाव
(GMT+08:00) 2018-01-09 09:20:37
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को १९ औँ महाधिवेशनले वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको विचारधारालाई पारित गर्दै पार्टीको विधानमा लेख्ने निर्णय गरेपछि यसको चर्चा नेपाली सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले अनौठो ढङ्गले गरे। सामाजिक संजालमा धेरैजसोले नेपालमा पनि अब सीवादी कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। सामाजिक संजालमा हल्का ढङ्गले नेपालमा पनि सीवादी पार्टीको आवश्यकता रहेको कुरालाई विभिन्न तर्क दिएर प्रष्ट्याउन खोजेको देखिन्छ। यो बारेमा नेपालमा गम्भीर बहस भएको छैन। सामाजिक संजालमा लेखिएकै भरमा नेपालमा सी चिन फिङ विचारधाराले तुरुन्तै प्रवेश पाउला भन्न सकिन्न तर यस बारेमा बहस भने अवस्य सुरु हुनेछ।
चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा अब हुने जे जति बहस हुनेछन् त्यसमा स्वत: सी विचारधारा जोडिन पुग्नेछ। त्यसो भए के अब चीनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सी विचारधारालाई निर्यात गर्दैछ ? यो प्रश्नमा चिनियाँ बुद्धिजीवीले सकारात्मक उत्तर नदिए पनि संभावना प्रचूर देखिन्छ। पानीको अणुमा हाइड्रोजन र अक्सिजन भएजस्तै चिनियाँ सहयोग र लगानीमा सी चिन फिङ विचारधारा सूक्ष्म रुपमै घुलिँदै छ।
चिनियाँ कुटनीतिको मियो अर्काको देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने हो। यो कुरालाई सी चिन फिङले सीपीसीको १९ औँ महाधिवेशनको उद्घाटनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ 'नयाँ युगमा प्रवेश गरेको चीनले स्वतन्त्र र आफू मालिक हुने शान्तिपूर्ण कूटनीतिक नीतिलाई अक्षरश: पालना गरेको र विभिन्न मुलुकका जनताले स्वतन्त्र रुपमा विकास हुने बाटोको छनौट गर्ने अधिकारको सम्मान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्यायको संरक्षण गर्दै आफ्नो विचारलाई अरुमाथि लाध्ने कुराको चीनले विरोध गरेको छ। अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिने र दवाबद्वारा कमजोर मुलुकमाथि हुने थिचोमिचोको चीनले विरोध गरेको छ। चीनको विकासले कुनै पनि मुलुकका लागि त्रास(धम्की दिने छैन। जसरी विकास भए पनि चीन सधैँ एकाधिकार र विस्तारको विपक्षमा रहनेछ।'
चीनले सैद्धान्तिक र घोषित रुपमै अर्काको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने पुरानो नीतिलाई दोहोर्‍याए पनि आफू मालिक हुने कुराको घोषणा गरेको छ। विशेष गरी 'सफ्टपावर'मार्फत चीनले विश्वमा प्रभाव जमाउँदै लगेको छ। सन् १९८० पछि चीन शान्त रुपमा आफ्नो मात्र विकास गरिरहेको थियो। यसलाई विश्वले चिनियाँ विशेषता नै ठानेको थियो। आफ्नो विकासको तीन दसकको अनुभव समेटेपछि अहिले आएर आफू मात्र समृद्ध बनेमा आफ्ना उत्पादनको बजार बिस्तार नहुने कुरा चीनले थाहा पायो। फलत: दुई कदम अगाडि बढेर सत्तामा आउनासाथ सीले छिमेकीलाई पनि समृद्ध बनाउने घोषणा गरे। चीनले विकास गरेको प्रविधि र चीनमा थुप्रिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्राको संचितीलाई विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी गर्नका लागि चीनकै भाषामा ती मुलुकहरुलाई पनि समृद्ध बनाउन आवश्यक छ। चीन वरिपरीपरिका बंगलादेश, म्यान्मार, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, भियतनाम, कम्बोडिया, मंगोलिया लगायतका मुलुकहरुलाई समृद्ध बनाएर चीन आफ्नो लगानीलाई फराकिलो बनाउन खोज्दैछ।
चीनले विभिन्न मुलुकमा लाने लगानीका परियोजनाहरुमा अब बीआरआई र सी बिचारधारा पनि उल्लेख हुनेछ। दिगो विकास, जनसहभागिता, वातावरण संरक्षण, गरिबी निवारण, सून्य भ्रष्टाचार, साझा जित, पारस्परिक सद्भाव, सांस्कृतिक संरक्षण लगायतका विषय चिनियाँ परियोजनाका मुख्य उद्देश्य हुन्। यी कुरा बीआरआईको अवधारणापत्रमा पनि उल्लेख छन्। यी सबै विषयहरुलाई चीनले सी चिन फिङ विचारधाराका रुपमा पनि लिपिवद्ध गर्दैछ। यस मानेमा सी विचारधारा बीआरआईमा आवद्ध भएका ६० भन्दा बढी मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निर्यात हुनेछ।
उल्लिखित कुराहरु सी विचारधाराका रुपमा चीनबाट निर्यात हुने शूक्ष्म र कम प्रभावकारी जस्ता देखिएपनि चीनको विकास मोडलबाट सी विचारधारा चाँडै फैलिनेछ। अहिले चीनले गरेको विकासको नमूना तथा गरिबी निवारणलाई विश्व अर्थशास्त्रका बैज्ञानिकहरु अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेका छन्। गत वर्षदेखि चीनले विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि पीएचडीमा बीआरआई छात्रवृत्ति सुरु गरेको छ। अब अर्को वर्षदेखि सी चिन फिङले ल्याएको विचारधारा र चिनियाँ विकास मोडलमा नयाँ छात्रवृत्ति खुल्नेछ। यसर्थ चीनले उच्च शैक्षिक कार्यक्रममा सी विचारधारालाई समेटेर विश्वमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्दैछ। सी विचारधारालाई चिनियाँ शैक्षििक संस्थाद्वारा उत्पादित ती विशेषज्ञले विभिन्न देशमा पुर्‍याउनेछन्।
यस बाहेक चिनियाँ विकासका नमूनाहरु जहाँ लागू गरिएका छन् त्यहाँ पनि सी विचारधारा पुग्नेछ। यस मानेमा विश्वको जुनसुकै कुनाकाप्चामा पुग्ने हरेक चिनियाँ नागरिकसँगै सी विचारधारा पनि पुग्नेछ। एक अर्ब ३७ करोड जनसंख्या भएको चीनमा जम्मा ८ करोड ९० लाख मात्र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य छन्। चिनियाँ जनसंख्यामा जम्मा साढे छ प्रतिशत मात्र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य रहे पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य नरहेका चिनियाँले पनि सी चिन फिङले अगाडि सारेको विचारधाराको खुलेर प्रशंसा र समर्थन गरेका छन्। चीन बाहिर गरिने हरेक चिनियाँ व्यवसायमा बीआरआई र सी विचारधारा उल्लेख हुँदा उनीहरुलाई चीन सरकारबाट समर्थन, सहयोग र संरक्षण प्राप्त हुनेछ। यसर्थ पनि उनीहरु सी विचारधाराका संवाहक हुनेछन्। चीन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार बनेको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानीले भारतलाई उछिनेर पहिलो स्थानमा पुगेको छ। चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अभियानमा नेपाल सहभागी भइसकेको छ। बीआरआईसँग समान उद्देश्य राखेर चीनकै पहलमा खुलेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको नेपाल संस्थापक सदस्य बनिसकेको छ। चीनले गर्ने सम्पूर्ण वैदेशिक लगानी र सहयोग अब बीआरआई माफत मात्र जाने गरी एकार प्रणाली लागू गरिसकेको छ। नेपालमा जाने चिनियाँ लगानी र सहयोग पनि स्वत: बीआरआईको बाटो भएर जानेछ।
सी चिन फिङको विचारधार र बीआरआईलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा १९ औँ महाधिवेशनले राखेको छ। यसको अर्थ अब नेपालमा जाने चिनियाँ सहयोग र लगानीसँगै सी विचारधारा पनि अदृश्य रुपमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसैगरी कन्फ्युसियस् इन्स्टिच्युटमार्फत नेपालमा जति शैक्षिक संस्थाले चिनियाँ भाषा र संस्कृतिको पठनपाठन गराइरहेका छन् त्यहाँ पनि सीविचारधारा पुग्नेछ। दुई देशबीचमा हुने सांस्कृतिक तथा जनस्तरका विभिन्न आदानप्रदानमाफत पनि सी विचारधारा नेपाल पुग्नेछ।
नेपाल चीनको छिमेकी मात्र नभई अत्यन्त घनिष्ट सहयोगी मुलुक पनि हो। पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ रेल र तेलको नारा सबै राजनीतिक दलहरुले लगाउन थालेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलले इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि चिनियाँ रेलको कुरा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा राखेका छन्। यसको अर्थ के हो भने सबैजसो नेपाली जनता चीनप्रति सद्भाव राख्छन्। 'चीनले छोटो समयमै त्यत्रो विकास गरिसक्यो तिमीहरु चाहिँ भ्रष्टाचार मात्र गरिरहन्छौ ?' भनेर नेपालीले आफ्ना नेतालाई गाली गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा चीनमा उच्च तहका नेताहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा धमाधम जेलमा हालिँदै गर्दा नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरी मुद्दा चलाइएका नेताहरुलाई अदालतले सफाइ दिएपछि जनताले 'के गर्नु चीनमा जस्तो हुनुपर्ने' भनेर चीनको उदाहरण दिन थालेका छन्।
नेपालमा चिनियाँ रेल गुडोस्, चिनियाँ पेट्रोल र ग्यास नेपाली बजारमा पुगोस्, चीनको जस्तै विकास होस्, चीनमा जस्तै गरिबी निवारण होस्, चिनियाँको जस्तै समृद्ध जीवनस्तर होस् भन्ने मनोभावना राख्ने नेपालीहरुले सी विचारधाराको प्रशंसा नगर्ने कुरै छैन। नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुले पनि सी विचारधाराको प्रशंसा गरेर बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। त्यस्ता बधाई तथा शुभकामना औपचारिक भए पनि उनीहरुले चिनियाँ विकास प्रणालीलाई कसरी अवलम्बन गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। चीनले बारम्बार बीआरआईका लागि परियोजना माग गर्दा पनि नेपाल आनाकानी गरिरहेको छ। जनताको दवावमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि नेपालकै हितमा रहेका परियोजना पेश गर्न हिचकिचाउनु नेपालमा चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई निरुत्साहित गरेर नेपालको विकासलाई पछाडि धकेल्नु हो। सरकार र ठूला भनिएका राजनीतिक दलको यस्तो हर्कतकै कारण नेपाली जनता सामाजिक संजालमा 'नेपाललमा पनि सी विचारधाराको पार्टी चाहियो' भन्न बाध्य भएका छन्।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७४ कात्तिक १७ (२०१७ नोभेम्बर ३) शुक्रबार।